Darpan Nepal – रमेश खरेलको राजीनामा स्वीकृत,को-को हुन् खरेललाई प्रहरी प्रमुख बन्न नदिने ?
काठमाडौं । प्रहरी महानिरीक्षक (आईजीपी) का दाबेदार प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डिआईजी) रमेश खरेलले दिएको राजीनामा स्वीकृत भएको छ । सरकारले डिआईजी सर्वेन्द्र खनाललाई महानिरीक्षक बनाएपछि असन्तुष्टि व्यक्त गर्दै खरेलले बुधबार राजीनामा बुझाएका थिए । उनको राजीनामा गृह मन्त्रालयले बुधबारै स्वीकृत गरेको हो ।
खरेलले आफू अपमानित भएर काम नगर्ने बताउँदै राजीनामा दिएका थिए । उनी ०४५ सालबाट भलिबल खेलाडीका रुपमा सिपाहीबाट प्रहरी सेवा प्रवेश गरेका थिए । सरकारले मंगलबार वरियता क्रममा पहिलो नम्बरमा रहेका खनाललाई आइजिपी बनाएको थियो । बरियतामा खरेल दोस्रो नम्बरमा थिए ।
को-को हुन् खरेललाई प्रहरी प्रमुख बन्न नदिने ?
गठबन्धनका प्रमुख राजनीतिक दल एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका शिर्ष नेताको आँखामा खरेल नपरेका कारण उनी आइजीमा बढुवा हुन पाएनन् । एसपी हुँदादेखि नै प्रभावकारी काम गरेका खरेलले एसएसपी हुँदा काठमाडौंमा गुन्डागर्दी तहसनहस पारेका थिए ।
उनी संगठनका लागि ‘क्रिम’ अफिसरका रूपमा कार्यरत थिए । उनले भनेका छन्, ‘संगठनको नेतृत्व गर्ने सपना बोकेर हिँडेको थिएँ अब काम गर्ने उर्जा नै नरहने भएकाले राजीनामाको मनस्थितिमा पुगेको हुँ।’
सर्वेन्द्र खनालमा आफैमा सक्षम प्रहरी अधिकारी हुन् । उनको नियुक्तिको विषयमा कहीँ कतै विरोध सुनिएको छैन् । तर, खरेललाई आइजीमा बढुवा गरे पनि खनालले आइजी हुने अवसर पाउने थिए । १३ महिनाको कार्यकाल सँगै खरेल घर जाने समयावधि हुँदा त्यसपछिको प्रहरी कमान्ड खनालले पाउने स्पष्ट बाटो थियो ।
यसो त उनी यसअघि नै शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारबाट अन्यायमा परेका थिए । देउवा सरकारले डीआइजी बढुवा गर्दा खरेललाई सर्वेन्द्र खनालले उछिनेका थिए । जतिबेला खरेल शान्ति मिसनमा डार्फरमा थिए । डीएसपीदेखि एसएसपीसम्म १ नम्बरमा रहेका खरेल डीआइजीमा भने दोस्रो भएका थिए । त्यतिबेला लागेको ठेसको चोट यसपटक खरेलले सहनु परेको हो । देउवा सरकारले आफूलाई अन्यायमा परेको भन्दै खरेलले प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिमा आफूलाई न्याय मिल्ने आशा गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री ओलीले वरियतालाई मिच्न चाहेनन् ।
यसअघि तीन नम्बरमा रहेका डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई आइजीमा बढुवा गर्दा तत्कालिन देउवा सरकार विवादमा तानिएको थियो । त्यसबेला प्रचण्ड प्रधानमन्त्री थिए । सोही विवादका कारणले सर्वोच्च अदालतकी तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश सुशिला कार्कीसम्मले महाअभियोगको सामना गर्दा राजनीतिक दलका नेताहरूको प्रत्यक्ष ‘इन्ट्रेस्ट’ सतहसम्म आएको थियो । टोप नेपाल बाट साभार गरिएको।
Previous Postकेपी ओलीलाई मान्छे मार्ने म्यान्डेट दिइएको छैन-स्वास्थ्यकर्मी Next Postब्रेकिङ खबर : भुइचालो गयो